ချည်ပတ္တူအိတ်စက်ရုံ | တရုတ်ချည်ပတ္တူအိတ်ထုတ်လုပ်သူများ, ပေးသွင်း
အမျိုးသမီးများအတွက် Plain Calico ကုန်စုံ Blank Organic Cotton Canvas Tote Bag အိတ်
အစွမ်းထက်သောအစွန်း ၁၀၀% သဘာဝ - ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ္တူတုတ်အိတ်များကိုအရည်အသွေးအကောင်းဆုံး ၁၂ အောင်စပတ္တူဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ထည်၏သိပ်သည်းဆယက်လုပ်ခြင်းအပြင်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုတွင်ဓာတုပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပေါင်းထည့်ခြင်းများကိုမသုံးပါ၊ ထို့အပြင်၎င်းတွင်အိတ်၏ကိုယ်ထည်နှင့်ကိုယ်ထည်အကြားရှိ၎င်း၏ခွန်အားကိုမြှင့်တင်ရန်ချုပ်ရိုး ၃ ခုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ပတ္တူတုတ်အိတ်သည်ပေါင် ၄၀ ကျော်ခံနိုင်ရည်ရှိပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
စိတ်ကြိုက်ပုံနှိပ်ထားသောအရောင်ရိုးရိုး ၁၀၀% ချည် Canvas ကုန်စုံစျေးဝယ်နိုင်သော Tote Bag
ကြာရှည်ခံနိုင်မှု - 12oz ဝါချည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပတ္တူစကတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအတွင်းပိုင်းချုပ်ရိုးချုပ်ထားသည်။ ချုပ်ထားသောချုပ်ရိုးများနှင့်အတူ၊ အားအင်လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်လက်ကိုင်သယ်ဆောင်ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ပခုံးပေါ်တွင် ၀ တ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေသည်။ နေ့စဉ်သုံးရန်လုံလောက်သည်။
သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောကြီးမားသောစွမ်းဆောင်နိုင်သည့်အိတ်ဆောင်ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစျေးဝယ်အိတ်များ ၁၀၀% ချည်ထည် Canvas Tote Bag
၁။ အရောင် - သင်ရွေးချယ်နိုင်သောမည်သည့်အရောင်မဆို၊ ၁၂ အောင်စ Canvas အိတ်၊ ဖောက်သည်တောင်းဆိုချက်အရအရွယ်အစားနှင့်စံအရွယ်အစား။
2. ၁၀၀% အမြန်ဆုံးတင်ပို့ခြင်းနှင့်ကောင်းမွန်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။
သဘာဝတရားကိုကာကွယ်ပါ - ပလတ်စတစ်နှင့်စက္ကူစျေးဝယ်အိတ်သည်ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်မကောင်းပါ။ စက္ကူနှင့်ပလတ်စတစ်အိတ်များကိုဖြုန်းတီးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ အကောင်းဆုံးသောရွေးချယ်မှုမှာကျွန်ုပ်တို့၏ကြံ့ခိုင်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်သောပြန်သုံးနိုင်သောဝါဂွမ်းပတ္တူအိတ်ဖြစ်သည်။
လေးလံသောတာရှည်ခံခြင်း - အရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ကိုင်အိတ်တွင်လက်ဆွဲအိတ်နှင့်အိတ်ကိုချုပ်ကိုင်ထားနိုင်သည့်တိကျသောဟဲဗီးဝိတ်ချုပ်များပါ ၀ င်သည့်အကောင်းဆုံးနှင့်အထူထည်ကိုအသုံးပြုသည်။
လက်ကားအော်ဂဲနစ် ၁၀၀% ဝါဂွမ်းထုံးစံအတိုင်းပုံနှိပ်ထားသောတုတ်ကင်းဗတ်စအိတ်
၁။ အထုပ်ပမာဏ - အထုပ်ကိုဖောက်သည်၏တောင်းဆိုမှုအဖြစ်ထုပ်ပိုးပြီးလွယ်ကူစွာကိုင်တွယ်ရန်လက်ရှည်ရှည်များကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားပြီးအသုံးပြုရန်အလွန်စွမ်းရည်ရှိသည်။ သင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်အတူမျှဝေနိုင်သည်
2. အရည်အသွေးရှိသောပစ္စည်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ဟယ်လိုဝင်းလက်ကိုင်အိတ်များသည်ပတ္တူ၊ အနံ့နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ပေါ့ပါးပြီးသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ ကြံ့ခိုင်ပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်၊ ဖြိုခွဲရန်မလွယ်ကူပါ၊ လက်ဖြင့်ရေအေးဖြင့်ဆေးကြောရန်အကြံပြုသည်။ အချိန်ကြာမြင့်စွာ